Ị nọ ebe a: Home / Usoro nke Ọrụ
Ọnọdụ na ọnọdụ ndị a na-achịkwa iji ejiji weebụ Weebụ Fixer Digest na ọdịnaya niile, ọrụ na ngwaahịa dị na ma ọ bụ site na weebụsaịtị (nke a na-agbakọta, na weebụsaịtị). The Planet Fixer Digest na-ejide weebụsaịtị ahụ ma jiri ya rụọ ọrụ ("Planet Fixer Digest"). A na-enye weebụsaịtị ahụ maka nkwenye gị n'enweghị mgbanwe nke usoro niile na ọnọdụ dị na ebe a na iwu ndị ọzọ na-arụ ọrụ, atumatu (gụnyere, na-enweghị njedebe, Atụmatụ Nzuzo nke Planet Fixer Digest) na usoro ndị a ga-ebipụta site n'oge ruo n'oge saịtị a site na The Planet Fixer Digest (n'ozuzu ya, "nkwekọrịta").
Biko gụọ akwụkwọ a nke ọma tupu ịnweta ma ọ bụ jiri weebụsaịtị. Site na ịnweta ma ọ bụ na-eji akụkụ ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ, ị kwenyere na ị ga-agbatị site na usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro na nkwekọrịta nke nkwekọrịta a, mgbe ahụ ịnwere ike ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ jiri ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na a na-ewere usoro na ọnọdụ ndị a dịka onyinye nke The Planet Fixer Digest na-enye, nkwenye na-egosipụta n'ụzọ doro anya na usoro ndị a. Na saịtị weebụ dị naanị maka ndị ọ bụla dịkarịa ala 13 afọ.
Gị The Planet Fixer Digest Account na saịtị. Ọ bụrụ na ị mepụtara blog / saịtị na weebụsaịtị, ị ga-ahụ maka nchekwa nke akaụntụ na blog gị, ị ga-enwerịrị ike maka ihe niile na-eme n'okpuru akaụntụ na ihe omume ọ bụla metụtara na blog. Ekwesighi ịkọwa ma ọ bụ nyefee isiokwu gị na blog na usoro nduhie ma ọ bụ nke iwu akwadoghị, gụnyere n'ụzọ a chọrọ iji ahia na aha ma ọ bụ aha nke ndị ọzọ, na Planet Fixer Digest nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepu ihe ọ bụla ma ọ bụ isiokwu ọ na-ewere na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na iwu akwadoghị, ma ọ bụ na o yiri ka ọ ga-akpata ụgwọ ọrụ Planet Fixer Digest. Ị ga-ekwupụta ozugbo The Planet Fixer Digest nke ọ bụla na-enweghị ikikere iji nke blog gị, akaụntụ gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ntiwapụ nke nche. The Planet Fixer Digest agaghị abara gị ikpe maka ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na-emeghị gị site na gị, tinyere nhụsịrị nke ụdị ọ bụla ọ kpatara n'ihi ihe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ ihe arụ.
Ọrụ nke ndị na-akwado. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na saịtị weebụ, kwuo okwu na blog, ziga ihe na weebụsaịtị, ntinye njikọ na weebụsaịtị, ma ọ bụ mee (ma ọ bụ kwe ka onye ọ bụla ọzọ mee) ihe onwunwe site na weebụsaịtị (ihe ọ bụla dị otú ahụ, "Ọdịnaya" ), Ị bụ naanị maka ọdịnaya nke, na nsogbu ọ bụla na-akpata, ọdịnaya ahụ. Nke ahụ bụ ihe ọ bụla n'agbanyeghị ma Ọdịnaya dị na ajụjụ bụ ederede, eserese, faịlụ dị egwu, ma ọ bụ ngwanrọ kọmputa. Site n'inweta Ọdịnaya dị, ị na-anọchite anya ma jide n'aka na:
nbudata, idetu na iji ọdịnaya eme ihe agaghị emebi iwu ikikere, gụnyere mana enweghị njedebe na ikike nwebisiinka, patent, ụghalaahia ma ọ bụ ikike nzuzo nzuzo, nke ọ bụla ọzọ;
ọ bụrụ na onye ọrụ gị nwere ikikere nke ikike ọgụgụ isi ị mepụtara, ị nwere (i) natara ikike n'aka onye were gị n'ọrụ ka ị biputere ma ọ bụ mee ka Ọdịnaya ahụ dị, gụnyere ma ọ bụghị njedebe na ngwanrọ ọ bụla, ma ọ bụ (ii) weghachite n'aka onye were gị n'ọrụ ikike niile ma ọ bụ na Ọdịnaya;
ị kwenyelarị ikikere ikikere ọ bụla nke metụtara Ọdịnaya ahụ, ma mee ihe niile dị mkpa iji mee nke ọma ị gafere ndị ọrụ njedebe usoro ọ bụla achọrọ;
Ọdịnaya ahụ enweghị ma ọ bụ wụnye nje ọ bụla, ikpuru, malware, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ mbibi;
ọdịnaya abụghị spam, abụghị igwe - maọbụ enweghị usoro-emepụtara, ọ nweghịkwa azụmahịa azụmahịa na-achọghị ma ọ bụ achọghị ka ịkwọ ụgbọala gaa na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ mee ka njikwa search engines na saịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ iji mee ihe ndị iwu akwadoghị (dị otú a dị ka phishing) ma ọ bụ na-eduga ndị nnata dị ka isi iyi nke ihe onwunwe (dịka ịkwanye);
Ọdịnaya ahụ abụghị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, enweghị egwu ma ọ bụ kpalie ime ihe ike n'ebe ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ma adịghị emerụ nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi nke onye ọ bụla ọzọ;
A naghị akpọsa mgbasa ozi gị site na ozi eletrọn achọghị ozi dị ka njikọ spam na kọntaktị, ndepụta aha email, blọọgụ ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ, yana ụzọ nkwado mgbasa ozi yiri nke ahụ;
A naghị aha gị blog na-eduhie ndị na-agụ gị na-eche na ị bụ onye ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, URL ma ọ bụ aha gị blog abụghị aha onye ọzọ karịa gị maọbụ ụlọ ọrụ ọzọ karịa nke gị; ma
ị nwere, n'ihe gbasara Ọdịnaya nke na-agụnye koodu kọmputa, akọwapụtara na / ma ọ bụ kọwaa ụdị, ọdịdị, njirimara na mmetụta nke ihe ndị ahụ, ma a rịọrọ ka The Planet Fixer Digest mee ya ma ọ bụ nke ọzọ.
Site na idobere ọdịnaya maka Planet Fixer Digest maka nsonye na weebụsaịtị gị, ịnye The Planet Fixer Digest n'ụwa dum, enweghị eze, na ikike nke na-abụghị nke nwere ike mụta nwa, gbanwee, gbanwee ma bipụta ọdịnaya naanị maka ebumnuche nke igosipụta , na-ekesa ma na-akwalite blog gị. Ọ bụrụ na ịhichapụ Ọdịnaya, Planet Fixer Digest ga-eji mgbalị ezi uche wepụ ya na weebụsaịtị, mana ị kwetara na caching ma ọ bụ ntinye aka na Ọdịnaya nwere ike ọ gaghị eme ozugbo ọ dịghị.
Na-enweghị mmachi ọ bụla n'ime ihe nnọchiteanya ndị ahụ ma ọ bụ ikikere, The Planet Fixer Digest nwere ikike (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ) iji nweta ezi uche dị na Planet Fixer Digest (i) jụ ma ọ bụ wepu ọdịnaya ọ bụla, nke dị na atụmatụ Planet Fixer Digest, mebiri ihe ọ bụla nke Planet Fixer Digest ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na-emerụ ma ọ bụ na-adịghị mma, ma ọ bụ (ii) kwụsị ma ọ bụ jụ ohere na iji nke weebụsaịtị na onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ maka ihe ọ bụla, n'ime naanị uche nke Planet Fixer Digest. The Planet Fixer Digest agaghị enwe ọrụ iji nyeghachi nkwụghachi ụgwọ nke ego ọ bụla a kwụrụ ụgwọ mbụ.
Ịkwụ Ụgwọ na Ọhụrụ.
Site na ịhọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ị kwenyere ịkwụ ụgwọ The Planet Fixer Digest otu oge na / ma ọ bụ ụgwọ ọnwa ọ bụla ma ọ bụ kwa afọ nke a gosipụtara (enwere ike itinye ụfọdụ nkwụnye ụgwọ na nkwukọrịta ndị ọzọ). Akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ga-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ n'ụbọchị ị debanyere aha maka Nwelite na ga-ekpuchi ọrụ nke ọrụ ahụ maka oge ịgba ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụ nke afọ dị ka egosiri. Nkwụ ụgwọ adịghị akwụ ụgwọ.
Ọ gwụla ma ị gwara The Planet Fixer Digest tupu njedebe nke oge ịkwụ ụgwọ dị na ịchọrọ ịkagbu ndenye aha, ndebanye aha gị ga-emeghachi aka na-akpaghị aka na ị na-enye anyị ikikere ịnakọta ọnụọgụ ndebanye ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ ọnwa ọ bụla maka ụdị ndebanye aha (yana ụtụ isi ọ bụla) site na iji kaadị akwụmụgwọ ọ bụla ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ anyị nwere na ndekọ gị. Enwere ike ịkagbu nkwalite ọ bụla n'oge ọ bụla site na ịnye arịrịọ gị na Planet Fixer Digest na ederede.
Ụgwọ; Ịkwụ ụgwọ. Site na ịbanye maka akaụntụ Ụlọ Ọrụ ị kwetara ịkwụ ụgwọ The Planet Fixer Digest na ụgwọ ọrụ ntọala na ụgwọ ndị ọzọ. A ga-akwụ ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ site na ụbọchị ọrụ gị guzosiri ike na tupu i jiri ọrụ ndị dị otú ahụ. The Planet Fixer Digest nwere ikike ịgbanwe ugwo ịkwụ ụgwọ na ụgwọ n'elu ụbọchị iri atọ (30) tupu ederede ederede gị. Ị nwere ike ịkwụsị ọrụ na oge ọ bụla na iri atọ (30) ederede ederede na Planet Fixer Digest.
Nkwado. Ọ bụrụ na ọrụ gị gụnyere ịnweta nkwado email dị mkpa. "Nkwado ozi" pụtara ikike ịza ajụjụ maka enyemaka nkwado teknụzụ n'oge ọ bụla (na - eme mgbalị site na Planet Fixer Digest iji zaghachi n'ime otu ụbọchị ahịa) gbasara iji VIP Ọrụ. "Ibu ụzọ" pụtara na nkwado ahụ ga-ebute nkwado karịa ndị ọrụ nke ọkọlọtọ ma ọ bụ ndị nweere onwe ha ọrụ The Planet Fixer Digest. All support will be provided according to The Planet Fixer Digest ụkpụrụ arụmọrụ ọrụ, usoro na atumatu.
Ọrụ nke weebụsaịtị. The Planet Fixer Digest adịghị enyocha, ma enweghị ike ịlele, ihe niile ahụ, gụnyere ngwanrọ kọmputa, ezigara na Websaịtị, ma ọ bụ ya mere ọ ga - abụrịrị ọrụ maka ọdịnaya, njiri ma ọ bụ mmepụta ihe ahụ. Site na iji weebụsaịtị, The Planet Fixer Digest anaghị anọchite anya ma ọ bụ na-egosi na ọ kwadoro ihe ahụ edere na ya, ma ọ bụ na ọ kwenyere na ihe dị otú ahụ dị mma, bara uru maọbụ na-adịghị emerụ ahụ. Ị ga-ahụ maka ịkpachara anya ka ọ dị mkpa iji kpuchie onwe gị na sistemụ kọmputa gị site na nje, ikpuru, ịnyịnya ịnyịnya, na ihe ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ mbibi. The weebụsaịtị nwere ike ịnwe ọdịnaya dị njọ, na-adịghị mma, ma ọ bụ na-enweghị isi, yana ọdịnaya nwere enweghị ike ọrụ ntanetị, mmezigharị ederede, na njehie ndị ọzọ. The weebụsaịtị nwekwara ike ịnwe ihe ndị na-emebi ikike nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi, ma ọ bụ imebi ikike ọgụgụ isi na ikike ndị ọzọ, nke ndị ọzọ, ma ọ bụ nbudata, mbipụta ma ọ bụ iji nke a na-agbakwunye na usoro na ọnọdụ ndị ọzọ, kwuru ma ọ bụ enweghị nkwenye. The Planet Fixer Digest na-ewepu ọrụ ọ bụla maka nsogbu ọ bụla nke ndị ọbịa nke weebụsaịtị weere, ma ọ bụ site na nbudata ọ bụla ndị ọbịa nke ọdịnaya ahụ nyere.
Ihe a na-enweta na saịtị ndị ọzọ. Anyị enyochabeghị, enweghịkwa ike inyocha, ihe niile ahụ, tinyere ngwanrọ kọmputa, nke a na-enweta site na weebụsaịtị na webpages nke njikọ The Planet Fixer Digest, na nke jikọtara The Planet Fixer Digest. The Planet Fixer Digest anaghị enwe njikwa maka ndị na-abụghị The Planet Fixer Digest na ebe nrụọrụ weebụ na webpages, ọ bụghịkwa maka ọdịnaya ha ma ọ bụ iji ha. Site na njikọta na weebụsaịtị Planet Fixer Digest ma ọ bụ webpage, The Planet Fixer Digest adịghị anọchite anya ma ọ bụ gosi na ọ na-akwado saịtị weebụ ma ọ bụ webpage. Ị ga-ahụ maka ịkpachara anya ka ọ dị mkpa iji kpuchie onwe gị na sistemụ kọmputa gị site na nje, ikpuru, ịnyịnya ịnyịnya, na ihe ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ mbibi. The Planet Fixer Digest kwụsịrị ọrụ ọ bụla maka nsogbu ọ bụla ị na - eji nke na - abụghị The Planet Fixer Digest na weebụsaịtị na webpages.
Ikike Ịgba Ụkpụrụ na DMCA. Dika The Planet Fixer Digest na-acho ndi ozo ka ha na-akwanyere ikikere ikike ya anya, o na-akwanyere ikikere ikike nke ndi ozo. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe onwunwe dị na ma ọ bụ jikọtara ya na The Planet Fixer Digest mebiri ikike nwebisiinka, a gbara gị ume ịkwado The Planet Fixer Digest dị ka ụkpụrụ Planet Fixer Digest's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). The Planet Fixer Digest ga-azaghachi ụdị ọkwa dị otú ahụ, gụnyere dị ka achọrọ ma ọ bụ kwesịrị ekwesị site na iwepu ihe mmebi ma ọ bụ ịkwụsị njikọ niile na ihe mmebi ahụ. The Planet Fixer Digest ga-eme ka onye ọbịa banye na iji nke weebụsaịtị ma ọ bụrụ na, n'ọnọdụ ndị kwesịrị ekwesị, onye nleta ahụ kpebisiri ike ịbụ onye na-emeghachị ikike nke nwebisiinka ma ọ bụ ikike ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi nke The Planet Fixer Digest ma ọ bụ ndị ọzọ. N'ihe banyere njedebe dị otú ahụ, The Planet Fixer Digest agaghị enwe ọrụ iji nyeghachi nkwụnye ego ọ bụla a kwụrụ ụgwọ na The Planet Fixer Digest.
Arịa ọgụgụ isi. Nkwekọrịta a anaghị ebufe gị na The Planet Fixer Digest ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi, na ikike, aha na mmasị na na ihe onwunwe dị otú ahụ (dịka n'etiti ndị ọzọ) naanị na Planet Fixer Digest. The Planet Fixer Digest, The Planet Fixer Digest, The Planet Fixer Digest logo, na ndị ọzọ ụghalaahia, akara ọrụ, ndịnaaja na logos ejiri na The Planet Fixer Digest, ma ọ bụ weebụsaịtị bụ ụghalaahia ma ọ bụ ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere nke Planet Fixer Digest ma ọ bụ ndị ọrụ ikikere Planet Fixer Digest. Ihe ịrịba ama ndị ọzọ, akara ọrụ, ndịna-emeputa na logos ejiri na njikọ weebụsaịtị nwere ike ịbụ ụghalaahịa nke ndị ọzọ. Ojiji nke weebụsaịtị a enyeghị gị ikike ma ọ bụ ikikere iji mụta ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọ bụla The Planet Fixer Digest ma ọ bụ ụghalaahịa ndị ọzọ.
Mgbasa ozi. The Planet Fixer Digest nwere ikike igosi mgbasa ozi na blog gị ọ gwụla ma ị zụrụ akaụntụ na-enweghị mgbasa ozi.
Onyinye. The Planet Fixer Digest nwere ikikere igosipụta njikọ ndị nwere mmetụta dị ka 'Blog na The Planet Fixer Digest,' edemede edemede, na edemede fon na bọtịnụ blog ma ọ bụ ngwá ọrụ gị.
Mmekọrịta Ngwaahịa. Site na ịmepụta ọrụ ibe (dịka isiokwu) site na otu n'ime ndị ọrụ anyị, ị kwenyere na ọrụ onye ọrụ ahụ. Ị nwere ike ịpụ na usoro nke ọrụ ha n'oge ọ bụla site na ịmepụta ọrụ onye ọrụ.
Ngalaba aha. Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha ngalaba aha, iji ma ọ bụ na-ebufe aha aha aha mbụ, ị kwetara ma kweta na iji ngalaba aha ahụ na-agbaso iwu nke Ụlọọrụ Intanet maka Aha na Ndenye aha ("ICANN"), gụnyere ha Ndebanye aha ikike na ọrụ.
Mgbanwe. The Planet Fixer Digest nwere ikike, na ya naanị uche, iji gbanwee ma ọ bụ dochie ọ bụla akụkụ nke Agreement a. Ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa Agreement a oge maka mgbanwe. Ịnọgide na-eji ma ọ bụ nweta na Websaịtị na-esochi ọkwa nke mgbanwe ọ bụla na Agreement a bụ ịnakwere mgbanwe ndị ahụ. The Planet Fixer Digest nwekwara ike, na ọdịnihu, na-enye ọrụ ọhụrụ na / ma ọ bụ atụmatụ site na weebụsaịtị (gụnyere, ntọhapụ nke ngwaọrụ ọhụrụ na ihe onwunwe). Ụdị njirimara na / ma ọ bụ ọrụ ndị a ga-edo onwe ha n'okpuru usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a.
Nkwụsị. The Planet Fixer Digest nwere ike ịkwụsị ohere gị niile ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị na oge ọ bụla, na ma ọ bụ na-enweghị ihe kpatara ya, na ma ọ bụ na-enweghị ọkwa, dị irè ozugbo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ikikere a ma ọ bụ akaụntụ Planet Fixer Digest (ma ọ bụrụ na ị nwere otu), ịnwere ike ịkwụsị iji weebụsaịtị. N'agbanyeghị ihe ndị a, ọ bụrụ na ịnwe akaụntụ ọrụ ịkwụ ụgwọ, The Planet Fixer Digest nwere ike ịkwụsị akaụntụ dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ị na-emebi ọgbụgba a n'ụzọ anụ ahụ ma ghara ịgwọ ụdị mmebi ahụ n'ime ụbọchị iri atọ (30) site na The Planet Fixer Digest. ; ma ọ bụrụ na, The Planet Fixer Digest nwere ike ịkwụsị weebụsaịtị ahụ ozugbo dịka akụkụ nke izugbe zuru ezu nke ọrụ anyị. Ngwunye nile nke nkwekọrịta a site na ọdịdị ha kwesịrị ịdị ndụ nkwụsị ga-alanarị nkwụsị, gụnyere, n'enweghị njedebe, ndokwa nke onye nwe ụlọ, ikike nkwekọrịta, ịkwụ ụgwọ na njedebe nke ọrụ.
Akwụsịghị akwụkwọ ikike. A na-enye weebụsaịtị "dị ka". The Planet Fixer Digest na ndị na-eweta ọrụ na ndị ikikere ugbu a kwụsịrị ikike niile nke ụdị ọ bụla, kwupụta ma ọ bụ gosipụta, gụnyere, na-enweghị njedebe, akwụkwọ ikike nke ire ahịa, ike maka otu nzube na enweghị mmebi. Ma The Planet Fixer Digest ma ọ bụ ndị na-azụ ya na ndị ikikere, na-eme ka ikike ọbụla na saịtị Weebụ ga-abụ n'efu ma ọ bụ na ịnweta ya ga-aga n'ihu ma ọ bụ na-egbochi. Ị ghọtara na ibudata na, ma ọ bụ nweta nweta ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ site na, weebụsaịtị ahụ n'onwe gị na ikike.
Ịkwụsị ụgwọ. Ihe ọ bụla ga - eme bụ The Planet Fixer Digest, ma ọ bụ ndị na - azụ ya ma ọ bụ ndị ikikere, nwere ike ịdabere na ihe ọ bụla metụtara nkwekọrịta a n'okpuru nkwekọrịta ọ bụla, enweghị nlezianya, iwu siri ike ma ọ bụ ụkpụrụ iwu ọzọ ma ọ bụ ikpe ziri ezi maka: (i) mmebi emebi emebi; (ii) ụgwọ nke ị nweta ihe maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị gbanwere; (iii) maka nkwụsị nke iji ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke data; ma ọ bụ (iv) maka ego ọ bụla gafere ụgwọ ị kwụrụ na The Planet Fixer Digest n'okpuru nkwekọrịta a n'oge ọnwa iri na abụọ (12) tupu ịmee ihe. The Planet Fixer Digest agaghị enwe ụgwọ maka ọdịda ọ bụla ma ọ bụ igbu oge n'ihi ihe karịrị nghọta ha. Ihe ndị a agaghị etinye aka na oke iwu iwu akwadoro.
Nnọchiteanya na akwụkwọ ikike. Ị na-anọchi anya ma kwenye na (i) iji ojiji Weebụ ahụ ga-adị nnọọ nro na Nzuzo Planet Fixer Digest, na Agreement a yana iwu na iwu niile dị (gụnyere na-enweghị okechi iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu obodo gị, obodo, obodo, ma ọ bụ mpaghara gọọmenti ndị ọzọ, maka omume weebụ na ihe anabatara nke ọma, na gụnyere iwu niile metụtara ya gbasara nnyefe nke data ntanetị si na United States ma ọ bụ obodo ebe ị bi na ya) na (ii) ghara imebi ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị ikike ikike ọgụgụ isi nke ọ bụla ọzọ.
Nkpughe. Ị kwenyere na ị ga-akwụ ụgwọ na Planet Fixer Digest, na ndị na-enye ya ikikere, na ndị nduzi ha, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ ha, na ndị niile na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ ha, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu, na weebụsaịtị, gụnyere ma ọ bụghị nanị na gị mebiri nke a Agreement.
Ihe dịgasị iche. Nkwekọrịta a bụ nkwekọrịta zuru oke n'etiti The Planet Fixer Digest na gị gbasara isiokwu a, ha nwere ike ịmegharị ya site na nsụgharị ederede nke onye ọrụ ikike nke The Planet Fixer Digest dere, ma ọ bụ site na nzipu site na Planet Fixer Digest nke a gbanwee nsụgharị. Ewezuga oke iwu ruru, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na-enye ndị ọzọ, nkwekọrịta a, ọbịbịa ọ bụla ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị ga-achịkwa iwu nke Provincia de San Jose, na-agụnye ọgba aghara iwu, na ebe kwesịrị ekwesị ọ bụla esemokwu nke si na ma ọ bụ na-emetụta nke ọ bụla n'ime otu ahụ ga-abụ ụlọikpe obodo na ụlọikpe gọọmentị dị na San José, San José. Ewezuga mkpesa maka njikwa ma ọ bụ nkwekọrịta ziri ezi ma ọ bụ nkwupụta maka ikike ikike akụ na ụba (nke a ga-eweta na ụlọikpe ọ bụla nwere ike ikpebi enweghị ọkwa), esemokwu ọ bụla na-ebute n'okpuru nkwekọrịta a ga-emesị mezie dịka Iwu Nchịkwa Na - Ụlọ ikpe ikpe na usoro mgbasa ozi, Inc. ("JAMS") site na atọ ndị ikpe na-akwado dịka Iwu ndị dị otú ahụ dị. A ga-eme mkpebi ahụ na San José, n'asụsụ Bekee, a ga-enyerịrị mkpebi mkpebi ikpe n'ụlọ ikpe ọ bụla. Ihe na-emeri na ihe ọ bụla ma ọ bụ ịga n'ihu iji mezuo nkwekọrịta a ga-enwerịrị ụgwọ ụgwọ na ndị ọka iwu. Ọ bụrụ na enwere akụkụ ọ bụla nke nkwekọrịta a adịghị mma ma ọ bụ ghara imeri ya, akụkụ ahụ ga-akọwa ya iji gosipụta echiche mbụ nke ndị ahụ, ihe fọdụrụnụ ga-anọgide na-arụ ọrụ na njirimara. Ajuju site na otu ọ bụla nke okwu ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ nke nkwekọrịta a ma ọ bụ mmebi ọ bụla, na ihe ọ bụla, agaghị eme ka okwu ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla ọzọ. Ị nwere ike ịnye ikike gị n'okpuru Agreement a na onye ọ bụla na-ekwenye na, ma kwenye ka agbatị, usoro na ọnọdụ ya; The Planet Fixer Digest nwere ike inye ya ikike n'okpuru nkwekọrịta a n'enweghị ọnọdụ. Nkwekọrịta a ga - ejide ma mee ka ọ dị irè uru nke ndị ọzọ, ndị na - anọchi ha na ọrụ e nyere ha.
Trimble 5800 gps rover iv kwuru
Biko mee ka m mara ebe ị nwetara isiokwu gị.
Situs Poker Terbaik kwuru
hp printer support phone number kwuru
온라인 카지노 kwuru
Long Beach work comp settlement kwuru
how to make real money in hindi kwuru
Drupal. Ihe mere m ji jụọ bụ maka na ịmepụta na ụdị gị yiri ka ọ dị iche ma ọtụtụ nchịkọta blọọgụ m na-achọ ihe pụrụ iche.
tennis and soccer 24/7 kwuru
best vps services for trading kwuru
O yiri ka ọ dị mgbagwoju anya na nke sara mbara.
senior citizen centers in jackson ms kwuru
asthma remedies kwuru
Curso Online de Cartonagem kwuru
Pasang Togel Online kwuru
Situs Poker Online kwuru
white label bingo software kwuru
moviesbaba gully boy kwuru
erectile dysfunction and smoking kwuru
Nivo 3.M Prism kwuru
from text to speech kwuru
juridiska tjänster kwuru
Kwukwara banyere ya kwuru
how to get help in windows 10 kwuru
Streaming Jav Online Free - JavPlay kwuru
Ọ bụ ihe ọma maka ihe ndị a!
Agen Pkv Egwuregwu kwuru
ikpe online kwuru
Pompano Beach Divorce Attorney kwuru
mgbazinye ego n'ihu kwuru
ego mgbazinye ego
mgbazinye ego n'ihu
best car hire nice kwuru
màn hình samsung j7 pro kwuru
carbon fiber mens ring kwuru
dentist durham kwuru
Agen Domino kwuru
Enwere m obi ụtọ na imewe na nhazi nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọrụ kacha mma!
tractr jeans kwuru
yahoo tech support kwuru
mens elevator kwuru
aqiqah bandung kwuru
voice generator kwuru
Gbasara ndi mmadu ajuju kwuru
elekọta mmadụ media kwuru
international courier service kwuru
cha cha online kwuru
KOB bitcoin kwuru
Nọgide na-ede ihe!
Enweghị m ike ịza ajụjụ. Edere nke ọma!
web design mallorca kwuru
walking shoes center kwuru
Servis reparasi apple macbook jakarta kwuru
mkb breda kwuru
web music kwuru
Enwere m mmasị dịka ị ga-anata na ebe a.
همیار دانلود - اشتراک ویدیو kwuru
google music download kwuru
Zdjęcie na drewnie kwuru
social security my account kwuru
output video kwuru
bingo software kwuru
situs poker online terpopuler kwuru
Achọrọ m ịchọta ihe ị na-arụ ọrụ na kọmputa?
Ị nwere ihe ngwọta ọ bụla?
handstand workshops kwuru
Ihe ndekọ ahụ nyeere m aka ịnabata ọrụ. Enwere m ntakịrị ihe banyere mgbasa ozi gị nke na-enye echiche doro anya
vtc taxi kwuru
free music software kwuru
hikvision malaysia price kwuru
malaysia city tour package kwuru
handstand workshops near me kwuru
situs dominoqq online kwuru
cheongsam wedding dress malaysia kwuru
home business opportunities kwuru
site streaming kwuru
الجائزة الكبرى سيارة شوفرليت kwuru
Rugby 320SG kwuru
Ana m eme atụmatụ ịmalite ebe nrụọrụ weebụ m n'oge na-adịghị anya ma enwere m ihe furu efu na ihe niile.
123movies subtitles kwuru
Topcon DL-503 Spec Sheet kwuru
123movies to friends kwuru
Ihe niile na-emeghe na nkọwa doro anya nke ihe ịma aka.
graphic Design about us Birmingham, West Midlands kwuru
ejuiceconnect coupon code kwuru
propylene glycol msds univar kwuru
wizard labs recipes kwuru
GL710 Calibration kwuru
situs judi qq online kwuru
solar movies sons of anarchy season 7 kwuru
tv episodes links kwuru
Toms Basement Waterproofing Repair Detroit Michigan kwuru
imagine there's no currency kwuru
adam and andrew kwuru
Trimble GX Data Sheet kwuru
ọ bụghị ugbua 😉 Cheers!
propolis 1000 kwuru
Judaism Learning kwuru
perder barriga rapido kwuru
Lee oke òkè! Nanị m ezigara nke a
Learning site kwuru
Tae will in the cut kwuru
egwuregwu android kwuru
topcon gls-2000 spatial scanner kwuru
m www.dailymotion.co kwuru
putlocker make it happen kwuru
sitis judi online kwuru
chapter 3 customer relationship management kwuru
DX-105AC Manual kwuru
beta test kwuru
Mmasị bara uru ị na-enye na isiokwu gị.
M ga-edokọbara blog gị ma lelee ọzọ ebe a mgbe niile.
Ọ bụ maka ọdịmma nke ọzọ!
Read Full Report kwuru
Ị nwere aro ọ bụla gbasara esi edepụta aha na Yahoo News?
Anọ m na-agbalị maka nwa oge, ma anaghị m achọ ka m nweta
naija gospel music download kwuru
Trimble FMX-1000 PDF kwuru
youtube cahayatogel kwuru
sextreffen dieses wochenende kwuru
Sell Spectra DG511 kwuru
affordable movers kwuru
Nkwekọrịta njikọ abụghị ihe ọ bụla ma e wezụga na ọ bụ ịtụkwasị nke ọzọ
long distance relocation kwuru
carpet cleaning metairie kwuru
amateurs porn videos kwuru
Vastu Purush kwuru
movers company kwuru
lắp đặt camera quận gò vấp kwuru
moving companies in bradenton fl kwuru
Bandar Judi Online Terpecaya kwuru
onye amateur porn kwuru
Ileba anya n'isiokwu a na-echetara m onye mụ na ya bibu!
Daalụ maka ịkekọrịta!
lắp đặt camera an ninh tại hải phòng kwuru
Kedu kpọmkwem ebe nkọwa kọntaktị gị dị?
Save water and save earth kwuru
giá lắp đặt camera lùi kwuru
corporate Event catering San diego kwuru
aesthetic medicine art and techniques 40 $0.56 0.09 kwuru
Ozi ndị ọzọ ebe a kwuru
wettenbet giris kwuru
buy real active instagram followers reviews kwuru
ede ihe. Cheers!
username checks out kwuru
situs judi qq online terpercaya kwuru
putlocker free ws kwuru
niềng răng hàn quốc kwuru
Amaghị m otú m si bịa ebe a, ma echere m na post a dị oke mma.
aesthetic medicine north 70 $0.00 0.03 kwuru
gratis dating online 1 hour loans direct lenders kwuru
mac clinic bangsar review 10 $0.00 0.14 kwuru
how to treat frozen shoulder kwuru
TX5 Spec Sheet kwuru
BỤ nnọọ ihe m na-achọ. Bịa ebe a site na ịchọ https://www.linkedin.com/pulse/cong-ty-xuat-khau-lao-dong-uy-tin-tai-ha-noi-tran-bin/
career coach UK kwuru
lắp đặt camera giám sát giao thông kwuru
lắp đặt camera hành trình tại hà nội kwuru
lắp đặt camera 3g kwuru
Nespresso compatible chocolate Coffee Pods kwuru
Flieger watches kwuru
рейтинг онлайн казино с бездепозитным бонусом kwuru
Rev. MICHAEL KEVIN kwuru
ایا تاسو د 10, 000 یورو او 10, 000, 000 یورو ترمنځ) د سوداګرۍ یا شرکت شرکت, شخصي پور, کور پورونو, د موټر پور, د قرض همغږۍ پور, پانګه پانګه, د روغتیا خدماتو پور, او نور لپاره د پور Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha gị na akaụntụ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-edebanye aha ya.
Ọ bụrụ na ị ga -
Nchịkọta akụkọ: ____________________________
Nbudata ngwa ngwa: ________________
Site na nke: _________________
Ntuziaka nke a: ___________________________
Ihe ndi ozo: __________________________
Nkọwapụta ihe: _______________________
Akwukwo Igbo: _______________________________
Gbasara Google: __________________________
Ọ bụrụ na ị. Ụdị ozi ọma
Egwuregwu: میخیلیلینینفینفینالیلانفیر @ gmail.com
types of saws for woodworking kwuru
Ma nke 400 pacotes disponíveis em Portugal.
zụta ezigbo ụmụazụ instagram kwuru
Achọrọ m ikele gị maka nnukwu ịgụ !! Obi tọrọ m ezigbo ụtọ
obere ntakịrị ya. Enwere m akwụkwọ gị akara iji chọpụta ihe ọhụrụ ị biputere ...
ma ọ bụrụ na ị chọrọ kwuru
Ezigbo ederede. Enwere m mmasị na saịtị a.
Nọgide na-arụ ezi ọrụ!
Ịgba Cha Cha pc kwuru
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịmawanye nke ọma ị na-aga na saịtị a ma bụrụ nke kachasị mma
agba asịrị ebe a.
Where To Find Joma Jewellery | Free Live Online Training and Courses ekwu, sị: